4U PRO - Ebe nrụọrụ ozi
Ọnọdụ paspọtụ, ndebanye aha
Igwe okwu, Ime Anwansi, Ịgba afa
Ọganihu Ime Mmụọ
Mwube na Ndozi
Oge ntụrụndụ, Ntụrụndụ
Usoro, Ntuzi, Adreesị
Food na-aba n'anya na
Mmekọahụ, Ịhụnanya, Mmekọahụ
Isiokwu maka ndị okenye
Egwuregwu ndị ahịa
Technology, themes, genres of shooting
Shawarma - Ezi ntụziaka maka nri nri n'ụlọ
22.12.2018 Hapụ ikwu
Shawarma - Ezi ntụziaka na-adọrọ mmasị maka ịkwadebe nri nri n'ụlọ. East na-enye efere ndị Europe na ọtụtụ efere, bụ ndị ka na-ewu ewu taa. Otu n'ime onyinye ndị a bụ ndụmọdụ - uzommeputa nke si na teknụzụ nke ịkwadebe efere kachasị ochie - kebab. Mkpa pita na ...
Omenala nke Afọ Ọhụrụ n'Ala nke Ọwụwa Anyanwụ
Omenala nke Afọ Ọhụrụ na Japan, omenala nke Afọ Ọhụrụ na Japan. A maara Japan maka ọtụtụ ọdịnala, ememe Afọ Ọhụrụ enweghịkwa ha. Ị ga-achọ ịmata omenala New Year na Japan tupu oge a? Gụchaa ya. Nkwanye omenala ...
Ndị na-eme ka oyi sie ike na-ewu ewu na tebụl Afọ Ọhụrụ
Ndị na-eri nri oyi na-adọrọ mmasị na tebụl Afọ Ọhụrụ. Ihe dị iche iche na-atọ ụtọ, mara mma ma na-anọdụ ala nri ga-esonye na ntụrụndụ ọ bụla ezumike, nzukọ nke New 2019 nke Yellow Earthen Pig abụghị ihe ọzọ. Ndị na-elekọta ụlọ, na-akwadebe iji nweta ndị ọbịa n'ụlọ ha, n'ọdịnihu ...
Afọ Ọhụrụ n'Ala nke Rising Sun: Omenala
Afọ Ọhụrụ na Japan: omenala ọdịnala na Japan (Japanese. O-shogatsu) bụ ememe a kacha hụ n'anya na nke mara mma, nke a na-eme na January 1 dịka kalenda Gregorian, bụ nke natara otu puku na narị asatọ na iri asaa na atọ, afọ ise mgbe Meziji rụghachiri. Tupu nke a ...
Nri nri nri "Snowman"
Nri nri nri "Snowman" nri dị ụtọ na tebụl oriri. Efrata: Anyị na-anọgide na-akwadebe maka Afọ Ọhụrụ! Taa, enwere m uzommeputa maka nri nri nri dị oke mma, ọ bụghị naanị cheese, kama site na ụdị cheese abụọ, nke zuru oke na-akwado ibe ha. Ntucha ...
Ntuziaka maka akwukwo nri ohuru ohuru 2019 na foto di mfe ma di uto
Ntuziaka maka Ezi Afọ Ọhụrụ nke Afọ Ọhụrụ 2019 Ezi ntụziaka na foto dị mfe ma dị ụtọ. Mgbụsị akwụkwọ abịala. Ọ na-enye anyị mmiri ozuzo na ihu igwe ọjọọ, na-ehi ụra n'ụdị okpukpu abụọ. Ma ọhụụ nke ụtụtụ na-acha oyi na-amalite na-apụta na ikuku, nke mbụ ...
Afọ Ọhụrụ n'Ala nke Rising Sun: Omenala na ọdịnala
21.12.2018 Hapụ ikwu
Afọ Ọhụrụ na Japan: omenala na ọdịnala. Dị ka Afọ Ọhụrụ na Japan a na-eme ememe Afọ Ọhụrụ na Japan bụ otu n'ime ememe kachasị amasị. E kwuwerị, ememme ndị ahụ, nke ga-amalite na December iri abụọ na asatọ na anọ Jenụwarị, na-akwụsị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmahịa niile na mba ahụ. ...
Afọ Ọhụrụ n'Ala nke Ọwụwa Anyanwụ, Omenala na ọdịnala
Afọ Ọhụrụ na Japan Afọ Ọhụrụ bụ nnukwu ụbọchị ezumike maka mba na ndị dị iche iche. Nke a bụ oge ezumike nke na-enye gị ohere ịzụta ngwaahịa n'afọ gara aga, cheta ihe merenụ n'afọ gara aga, nwee obi ụtọ na ihe omume ma chekwaa ma cheta ihe ndị ahụ ...
Ntuziaka nke Appetizer Afọ Ọhụrụ
Ntughari afọ ọhụrụ m na-enye otu n'ime nhọrọ maka nri Julien. Banyere telecast obi ụtọ bụ! Nchịkọta Helen Chekalova Ma ọ bụrụ na nwanyị ọ bụla na-arụ ọrụ na-enwe cocoon na kichin, ma ị nwere ike rie juliens ọ bụghị nanị na cafe ma ọ bụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Nri na-atọ ụtọ ...
Ụdị ọdịnala ndị Japan na New Year
Ụdị omenala ndị Japan na afọ ọhụrụ Anyị ga-agwa gị banyere ụfọdụ omenala nke ememe Afọ Ọhụrụ na Japan, nke gụnyere ememme ndị dị iche iche maka Slav nwere ihe atụ pụrụ iche pụrụ iche. Ma anyị ga-eso uzommeputa nke ihe ijuanya tọrọ ụtọ Japanese nri, nke e kwadebere karịsịa n'ihi na ị ...